Turkiga oo xarigga ka jaray saldhigga milateri ee Muqdisho - BBC News Somali
30 Sebtembar 2017
Image caption Saldhigga Turkiga ee Muqdisho.
Ahmiyadda saldhiggani uu u leeyahay milateriga Soomaaliya
Saldhigan oo loo dhisay qaab casri ah ayaa ku yaalo deegaanka Jasiira ee magaalada Muqdsho, waxaana dhismahani uu ku fadhiya dhul dhan afar kilomitir. Saldhiggani ayaa waxaa uu sidoo kale leeyahay darbi shub ah iyo dhismayaal casri.
Madaxdii halkaasi ka hadashay oo isugu jira Soomaali iyo Turki ayaa ku nuxnuuxsaday in saldhigani uu gacan ka geysan doona sidii loo tayeen lahaa ciidammada dowladda.
Taliyaha ugu sareeya ciidammada milateriga ee Soomaaliya Axmed Jimcaale Cirfiid ayaa sheegay in dhibaato ay ku qabeen qalabeynta ciidammada marka la tababaro, waxaana uu bogaadiyay tallaabadan dowladda Turkiga ay ka hirgalisay gudaha wadanka.
Dugsigan tababarka ayaa u sahli doonaa wasaarada gashandhiga ee Soomaaliya sidii loo qalabeyn lahaa ciidammada dowladda.
Sidookale taliyaha ugu sareeya ciidammada dalka Tukiga Generaal Hulusi Akar ayaa ka hadlay xafladaasi, waxaa isna xaflada ka hadlay ra'iisul wasaarha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo sheegay in dugsigani uu asaas u noqon doono dhismaha ciidanka cusub ee Soomaaliya.
Kheyre ayaa intaa ku daray in Soomaaliya ay u baahantahay ciidan qaran oo aan qabiil aheyn, waxaan dugsigan tababarka uu sheegay in uu bilaw u yahay horumarka cusub ee dhanka gashandhiga.
Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab oo dagaal ku dhex maray Jannaale, Bariire